Ndị ahịa Google Pixelbook Go Cyber ​​​​Monday ndị a dị ịtụnanya… ma ha kwụsịrị taa - 【 Comparison】 2022
Ndị ahịa Google Pixelbook Go Cyber ​​​​Monday ndị a mara mma… ma ha na-akwụsị taa
A chụrụ gị n'ọrụ!: 149 (The Orange Steamboat)
Flynn, Rachel (Onye edemede)
N'ime ọtụtụ Chromebook ị nwere ike ịzụta taa, Google Pixelbook Go na-adị mfe otu n'ime ihe kachasị mma na ahịa ma gosi ihe a ga-eme na ChromeOS. Achọrọ m ịpụta na Black Friday nke afọ a wee pụta ọzọ maka nkwekọrịta Cyber ​​​​Monday.
Ọ bụ ezie na Pixelbook Go bụ otu n'ime akwụkwọ Chrome dị oke ọnụ ị nwere ike ịzụta, Google ekpebiela na ekeresimesi ga-abịa na mbụ maka ndị a, na-enweta ihe ruru € 150 na saịtị nke ya.
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa ndị ọzọ dị ka Best Buy na-echekwa € 50 na ụdị Pixelbook Go, Google ekpebiela itinye € 150 na ụdị Pixelbook Go nke kachasị elu ruo Disemba 1.
Mana enwere mbelata ndị ọzọ na ụdị Pixelbook Go ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ nkwekọrịta na Pixelbook Go, ugbu a bụ oge.
(Ọ bụghị na US? Pịgharịa gaa na ala maka azụmahịa na mpaghara gị.)
Ahịa Google Pixelbook Go Cyber ​​​​Monday kacha mma taa
N'ime atọ ahụ, nhazi abụọ Google Pixelbook Go dị ugbu a nwere 5th Gen Intel Core i1080 processor, ihe ngosi 13,3-inch 128p, na XNUMXGB SSD, naanị ihe dị iche bụ ọnụọgụ RAM.
Ihe nlereanya nke atọ bụ nke dị ọnụ ala na € 599 ekele maka ego 50 €, mana o nwere ihe nrụpụta Intel Core m3 dị obere, yana nchekwa 64GB.
Ụdị 16GB RAM na-enye nnukwu mbelata na € 150, mgbe Pixelbooks na-agba ọsọ na ChromeOS, ị ga-eme ọtụtụ ọrụ gị site na ihe nchọgharị Chrome. O yighị ka ebe nchekwa ga-agwụ gị, mana ọ ga-enye aka dị ukwuu mgbe ị na-anwale egwuregwu, dịka ọmụmaatụ.
Onyinye ndị a anaghị adịte aka, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ laptọọpụ Google nwere ike ịchekwa akaụntụ ọrụ Google gị niile, ebe ị ka nwere ike ịrụ obere ọrụ maka ọrụ ma ọ bụ kọleji, nke a nwere ike ịbụ Chromebook ịchọrọ ịzụta.
Ọnụ ahịa Google Pixelbook Go ndị ọzọ
N'agbanyeghị ebe ị bi, ị ga-ahụ ọnụ ahịa kacha ala maka Google Pixelbook Go na webụ ebe a, yana azụmahịa dị na mpaghara gị.
Ahịa Google Pixelbook Go kacha mma nke oge a
More azụmahịa Cyber ​​Monday